Filmy News | Artist Khabar | Page 34
Filmy News	तोकियो ‘रेशम फिलिली’को पुनः प्रदर्शन मिति, आउलान त दर्शक ?	जेठ, काठमाडौं । बैशाख ११ गते बाट देशभर एकैसाथ प्रदर्शन शुरु भएको चलचित्र 'रेशम फिलिली'ले पहिलो दिनमै ७२ लाखको ठुलो ओपनिङ गर्यो । तर दोस्रो दिन गएको विनाशकारी भुकम्पले गर्दा रेशम फिलिलीलाई निकै ठुलो धक्का लाग्यो । त्यस पश्चात अनिश्चितकालिन समयका लागि बन्द भएका चलचित्रहरु अब एकाएक प्रदर्शन मिति तोक्ने क्रममा छन् । नेपालका अधिकांश हलहरु..	दुई दिन भन्दा टिक्न सकेन ‘६ एकान ६’	जेठ, काठमाडौं । भुकम्पपिडितहरुको सहयोगार्थ पुनः प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ६ एकान ६ दुई दिनसम्म मात्र फिल्महलमा लाग्न सफल भयो । एकपटक सबैले हेरीएको चलचित्र र युट्यव र सिडी, डिबिडीमा समेत आईसकेको चलचित्र ६ एकान ६ काठमाडौं लगायत काठमाडौं बाहिरका हलहरुमा पनि लगाईएको थियो । चलचित्रको प्रदर्शन पछि उठेको सम्पुर्ण रकम भुकम्प पिडितहरुको लागि..	‘अधकट्टी’को च्यारिटी शो हुने, संकलन रकम भुकम्प पिडितलाई	जेठ, काठमाडौं । चलचित्र अर्धकट्टिको च्यारिटी शो गरीने भएको छ । च्यारिटीबाट उठेको रकम भुकम्पपिडितलाई बितरण गरीने निर्माण पक्षले जनाएको छ । आउदो असार १ गते राजधानीको कुमारी हलमा फिल्मको च्यारिटि गरिन लागिएको हो ।
कुमारी हलमा साँझ ६ बजेबाट शुरु हुने शोमा दुई वटा पर्दामा फिल्म लाग्नेछ । आइएएफ नेपालको आयोजना र नायिका ऋचा शर्माको संयोजनमा..	चलचित्रकर्मि निरन्तर सहयोगमा जुट्दै, बोर्डबाट ५ लाख पिडितका लागि	जेठ, काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले भुकम्प पिडितहरुको लागि बिभिन्न सहयोग गर्ने क्रममा अर्को उदाहरणीय काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप तथा उद्दार राहत कोषमा नगद ५ लाख सहयोग गरेर चलचित्र विकास वोर्डले एक उदाहरणीय काम गरेको हो । नेपालमा गएको बिनाशकारी भुकम्पमा परी घरबार बिहिन भएकाहरुलाई अस्थाथी घर बनाईदिने, राहत बिरतण गर्ने..	चलचित्र पत्रकारिता दिवस भुकम्पले प्रभावित	जेठ, काठमाडौं । बर्षेनी जेठ ७ गते मनाउँदै आएको चलचित्र पत्रकारिता दिवस नेपालमा आएको भुकम्पले प्रभावित भएको छ । गत बैशाख १२ गते आएको भुकम्पले सिंगो नेपाल रोएको बेला हरेक बर्ष चलचित्र पत्रकारिता दिवसमा प्रदान गर्दै आइएको चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार र सम्मान पनि वितरण गर्न नसकिएको चलचित्र पत्रकार संघले विज्ञप्ती निकालेर बताएको छ । हरेक..	भुकम्पले गर्दा चलचित्रको प्रदर्शन मिति सर्यो	बैशाख, काठमाडौं । नेपालमा गएको महाभुकम्पले गर्दा धेरै जनधनको क्षति भयो । सँग सँगै नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्ने नै भयो । गएको सनिबार गएको महाभुकम्पले गर्दा एक महिनासम्म सिनेमा हलहरु बन्द रहने भएका छन् । साथै प्रदर्शनको तयारीमा रहेका सिनेमा हरुको पनि मिति सारीएको छ ।
यदि वैशाख १८ गते शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म..	छाता ओडेरै हेरे रेशम फिलिली, हाउसफुलका साथ प्रदर्शनीमा (फोटो फिचर)	बैशाख, काठमाडौं । प्रदर्शनी अघिनै निकै चर्चामा रहेको चलचित्र रेशम फिलिली आज (शुक्रबार) बाट प्रदर्शनीमा आएको छ । हाउसफुलका साथ आज बाट प्रदर्शन भईरहेको रेशम फिलिलीको बिहिबार साँझको भब्य प्रिमियरमा एउटा भिन्दै पन दिएर कार्यक्रम गरेको थियो । रेड कार्पेटको सट्टा सुकुल विछ्याईएको फिलिली प्रिमियरमा चलचित्र क्षेत्रका धेरैको उपस्थिति रहेको..	‘किस्मत २’ ले जिम्मेवारी र चुनौती थपिदियोः लामिछाने	बैशाख, काठमाडौं । निर्देशक ऋषि लामिछाने चलचित्र ‘किस्मत २’ को निर्देशनको अवसरलाई आफुले जिम्मेवारी र चुनौतीको रुपमा ग्रहण गरेको बताउनु भएको छ । छविराज दाइले निर्देशनका लागि मलाई नै दोहोर्याउनु भयो यो खुसीको कुरा हो तर सँगसँगै जिम्मेवारी र चुनौति महसुस गरिरहेको छु , किस्मत २, पहिलाको हिट फिल्म भएकोले पनि मलाई अझ जिम्मेवारी थपिएको महसुस..	आर्यन नम्रताबाट उद्घाटन गरियो नयाँ स्टोर	बैशाख, काठमाडौं । बिग ब्यानरको रुपमा परिचित सुवास इन्टरटेन्टमेन्टले आर्यन सिग्देल इन्टरटेन्टमेन्ट संगको सहकार्यमा निर्माण गर्न लागिएको दोश्रो चलचित्र 'क्लासिक'ले अफिसियल ब्राण्डीङ्गको सुरुवात गरेको छ | 'क्लोथ्स् नेपाल' नामक वर्डड्रप संस्थामार्फत अफिसियल ब्राण्डीङ्गको सुरुवात गरेको चलचित्र 'क्लासिक' निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने..	होस्टेल रिटन्र्स ले जाजरकोट बासीलाई सहयोग गर्ने	बैशाख, काठमाडौं । यहि बैशाख २५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली चलचित्र होस्टेल रिटन्र्स ले एक महिना देखी मौसमी फ्लूको महामारीबाट शिकार जाजरकोट बासिलाई सहयोग गर्ने भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको यस फिल्मले अष्ट्रेलिया प्रदर्शनबाट हुने आम्दानीको केही प्रतिशत रकम जाजरकोट वासीको उपचारका लागि सहयोग गर्न लागेको हो..	Pages:«1...2829303132333435»